Somaliland: Madaxweyne Biixi Iyo Mulkiilayaasha Isgaadhsiinta Oo Kulmay - #1Araweelo News Network
Somaliland: Madaxweyne Biixi Iyo Mulkiilayaasha Isgaadhsiinta Oo Kulmay
Maxay Ka Wada Hadleen?
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta qasriga Madaxtooyadda ku qaabilay Shirkaddaha Isgaadhsiinta, kaddib markii ay labada shirkadood ee Telesom iyo Somtel kala saxeexdeen heshiis dhigaya in Telefoonada laysu furo.
Heshiiskaa oo uu goob ka ahaa Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyadda Somaliland oo uu u saxeexay Dr. Cabdiweli Sh. Cabdullaahi, isla markaana daba socday heshiis ay dhowaan wada gaadheen xukuumadda Somaliland iyo shirkaddaha Telesom, Somtel iyo Somcable, kaas oo ahaa in la wadaago xadhiga Fiber Optic.
Qoraal kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda oo nuqul ka mid ah soo gaadhay shebekaddaha Araweelo News Network, ayaa u dhignaa sidan: –
Madaxweynaha Somaliland, wuuxuu maanta qasriga madaxtooyadda, ku qaabiley madaxda shirkaddaha gaarka loo leeyahay ee isgaadhsiinta oo uu heshiis guul ku soo dhammaaday dhexmaray dawlada Jamhuuriyadda Somaliland.
Heshiiskan oo nuxurkiisu yahay in la wadaago lahaanshaha xadhiga fiberka ah oo ah hanti qaran. Xadhigaas oo ay wada yeelan doonaan Dawlada Jamhuuriyadda Somaliland oo ay heshiishka ku matalayso Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyadda Somaliland iyo saddexda shirkadood ee kala ah:
1. SOMCABLE oo uu metelayey Ganacsade Maxammed Siciid Geeddi.
2. SOMTEL oo uu metelayey Ganacsade Maxammed Siciid Ducaale.
3. TELESOM oo uu metelayey Ganacsade Cabdikariim Maxammed Iid.
4. Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyadda Somaliland oo uu u saxeexay Dr. Cabdiweli Sh. Cabdilaahi Suufi.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ku bogaadiyay heshiiska taariikhiga ah ee dhexmaray shirkadaha iyo Dawlada Jamhuuriyadda Somaliland ee ku qotoma Isfahanka iyo wada-shaqaynta, Isaga oo madaxwaynuhu uga mahadceliyey shirkadaha dalka maalgashaday iyo doorka ay ugu fadhiyaan qaranka oo ah mid lama illaawaan ah, ayaa lagu yidhi, heshiiska.